I-Ergopedic ephaketheni entwasahlobo umatilasi ngamanani aphelele | Rayson
Ngamandla aqinile we-R & D kanye namandla okukhiqiza, amaRayson manje asephenduke umenzi wobungcweti kanye nomhlinzeki onokwethenjelwa embonini. Yonke imikhiqizo yethu kufaka phakathi umatilasi waseSprist we-ERGopedic entwasahlobo akhiqizwa ngokususelwa ohlelweni oluqinile lokuphathwa kwekhwalithi namazinga aphesheya. I-Ergopedic ephaketheni entwasahlobo umatilasi ngabe utshala imali eningi kuMkhiqizo R & D, ophenduka aphumelele ukuthi sithuthukise umatilasi wasePocket eSprist. Ukuthembela kubasebenzi bethu abasha nabasebenza kanzima, siyakuqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, izintengo ezinhle kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Uyemukelwa ukuxhumana nathi uma unemibuzo.Umklamo weRaygonon ergopedic ephaketheni entwasahlobo i-Spring Matress ehlanganisa izinto eziningi ezibalulekile embonini yezemfashini. Okubalulekile kufaka phakathi umbala, i-silhouette, ingxenye, indwangu, ukuthungwa, ukusampula iphethini, ukusika nokunye.